नेपाल र चीन नदीनाला, पहाड, पर्वत र हिमालले जोडिएका, प्राग–ऐतिहासिक कालदेखि जनस्तरमा सम्बन्ध रहँदै आएका घनिष्ठ मित्र देशहरु हुन् । जलस्रोतको दृष्टिबाट दुबै एउटै जलाधार भएको सहतटीय मुलुकहरु हुन् ।
बिहिवार, भदौ २४, २०७८ हिरण्यलाल श्रेष्ठ
हामी बसेको विश्वको दुईतिहाई भन्दा बढि भाग पानीले ढाकिएको छ । तर पनि यही विश्वमा बस्ने दुई तिहाई भन्दा बढि मानिस पर्याप्त सफा र स्वच्छ पिउने पानीबाट बञ्चित रहेका छन् किनभने महासागर र सागरहरुमा रहेको ९७ प्रतिशत पानी नुनिलो र पिउनलायक छैन । केवल ३ प्रतिशत पानी मात्र विश्वमा विउन हुने खालको छ । त्यसमध्ये पनि २ प्रतिशत हिउँ र हिमनदीको रुपमा रहेको छ । वास्तवमा एक प्रतिशत पानी मात्र स्वच्छ, सफा र उपयोगमा आइरहेको छ ।
पानी बिना मान्छे बाँच्न सक्दैन । बिजुली निकाल्ने अनेकौं विकल्पहरु छन् । जलविद्युत, सौर्य, परमाणु, हावा ईत्यादि तर पानीको विकल्प छैन । तर पानीको उपभोग बढ्दैछ । ....... क्रमशः अपुग, अभावग्रस्त र महङ्गो हुँदैछ । तसर्थ पानीको लागि विश्वभर विवाद बढ्दै गएको छ । पानीको स्रोत कसले, कसरी कब्जा गर्ने भन्ने होडबाजी चल्दैछ । विश्वमा द्वन्नद्वको नयाँ स्रोत पानीको विवाद हुनेछ ।
एशियाको प्राचीन सभ्यता र प्रमुख बस्तिहरु ठूला नदीहरुकै किनारामा विकसित भएको एक ऐतिहासिक सत्य र तथ्य हो । आधुनिकि कालको उन्नत विज्ञान र प्रविधिको प्रयोग गरेर ठूला जलस्रोत परियोजनाहरु निर्माण र कार्यान्वयन गरि जलस्रोत क्षेत्रमा आधुनिकीकरण गरिएको छ । नदी र तालहरु एशियाको समृद्धिका आधारहरु हुन् । वंगलादेशमा ५० भन्दा बढि नदीहरु छन् । भुटानमा ४, भारतमा ४००, इण्डोनेशियामा २००, जापानमा १०८, लाओसमा १, कोरियामा १०, सिंगापुरमा ५, थाइल्याण्डमा १०, नेपालमा ४ प्रमुख नदीहरु छन् । सबभन्दा धेरै जलस्रोत चीनमा छन् । चीनका ७ प्रमुख नदीहरुमा याङ्गसे, एल्लो, पर्ल, हुआइहे, हाईहे, सोङगुजियाङ र लियाहे हुन् ।
तिब्बत एशियाको प्रमुख नदीहरुको स्रोत
एशियाको ६ वटा प्रमुख नदीहरुको उद्गमस्थल चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र हो । ४६ प्रतिशत विश्व जनसंख्या तिब्बतमा उत्पन्न भएका नदीहरुको पानीमा आश्रित छन् । सिन्धु, गंगा, बह्मपुत्र, इरावती, सल्विन र मेकोङ्ग नदीहरु तिब्बतबाट उत्पत्ति भएका हुन् । तिब्बत एशियाकै प्रमुख नदीहरुको स्रोत भएकोले चीन एशियाको जलस्रोतको प्रमुख र दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियामा पानी आपूर्तिमा नियन्त्रण र विकास गर्न सक्ने क्षमता भएको स्रोतमुलुक भएको छ । पश्चिम र दक्षिणका केही मुलुकहरुले तिब्बतमा विखण्डनवादीहरुलाई उछाल्ने गलत काम गर्दैछन् ।
मेकङ्ग नदी क्षेत्रीय सहकार्य उदाहरणीय
चीनबाट उत्पत्ति भएको मेकङ्ग नदी दक्षिणपूर्वी एशियाको सबभन्दा लामो नदी हो । एशियाको सातौं र विश्वको बाह्रौं लामो नदी पनि हो । करिब २७०० माइल लामो मेकङ्ग नदी चीन, म्यानमार, लाओस, थाइल्याण्ड, कम्बोडिया, भियतनाम हुँदै दक्षिण चीन सागमा मिसिएको छ । सन् २०१६ मा उपरोक्त ६ देशहरु मिलेर मेकोङ्ग नदी क्षेत्रीय सहयोग स्थापना गरेका छन् । बाढी नियन्त्रण, जलविद्युत उत्पादन, सिँचाई, जलमार्ग लगायत बहुआयामिक जलउपयोगमा साझा प्रयास यसका विशेषता रहेका छन् । अमेरिकाले एशिया प्रशान्त रणनीति बनाएर मेकोङ्ग सहयोगमा भाँजो हाल्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ ।
जलस्रोतमा नेपालको दृष्टि एक अनुभव
इसिमोडको सन् २००१ को प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘पानी नेपालको सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक स्रोत हो । नेपालमा छ हजार भन्दा बढी नदीनाला छन् । सुख्खा मौसममा हिमालबाट बग्ने पानी प्रतिवर्ष ४ हजार ९ सय ३० क्युविक लिटर प्रतिसेकेण्ड अनुमान गरिएको छ । यो सतहबाट बग्ने कूल पानीको ७० प्रतिशत हुन्छ । पानीमा धनीभएर पनि नेपालले आफ्नै लागि यसको पर्याप्त उपयोग गर्न सकेको छैन ।’
नेपालमा सन् १९११ मा फर्पिङमा पहिलो जलविद्युत ५०० कि.वा. को उत्पादन सुरु भयो । यो नेपालको पहिलो र एशियाको दोस्रो जलविद्युत परियोजना हो । वि.स. १९८० मा नेपालको पहिलो आधुनिकि नहर सप्तरीमा चन्द्रनहर निर्माण भयो । नेपालले भारतसँग १९२० मा हार्दा बाँध सम्झौता, १९५४ ई. मा कोशी योजना, १९५९ ई. मा गण्डक सम्झौता र १९९६ ई. मा महाकाली सम्झौता भयो । शारदा बाँधबाट भारतले १४ हजार क्युसेक र नेपाललाई ४ सय ६० क्युसेक (३.९७%अनुपात), कोशीबाट भारतले २३६ हजार क्युसेक र नेपालले १६ सय क्युसेक (६.५ र ९३.५% को अनुपात), गण्डक सम्झौतामा भारतले २९ हजार क्युसेक र नेपालले ८ सय ५० क्युसेक अर्थात् ३.५७% को अनुपात) मा पानीको असमान वितरण गरिएको छ । सीमा नदी महाकाली सन्धिमा समान भनिए तापनि अग्रिम उपभोगको बहानामा बढी पानी सोर्ने भारतको दबाबको कारण पञ्चेश्वर डिपीआर अझै तयार गर्न सकिएको छैन ।
द्विपक्षीय जलस्रोत क्षेत्रमा कटु अनुभव बोकेको नेपालले १९७७ डिसेम्बर ५ मा जलस्रोत क्षेत्रमा क्षेत्रीय सहयोगको आह्वान ग¥यो । राजा वीरेन्द्रले कोलम्बो योजनाको २६ औं परामर्शदातृ समितिको बैठकको उद्घाटन गर्दै भन्नु भयो– ‘‘जलस्रोत नेपालको आर्थिक विकासको निमित्त एउटा महत्वपूर्ण साधान हुनसक्छ तापनि यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको दृष्टिकोणले मात्र हेर्ने हाम्रो अभिप्राय रहेको छैन । हाम्रा मित्रराष्ट्रहरुकाबीच खासगरी नेपाल, भारत, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र यस क्षेत्रका अरु सबै मुलुकहरुकाबिच पारस्परिक सहयोग कायम भएका यस्ता असंख्य प्रकृतिक स्रोतहरुको यस क्षेत्रका सबै मुलुकहरुलाई लाभ पु¥याउने गरी उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।’’
सार्क र विमस्टेकमा जलस्रोत
दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रहरु अफगानिस्तान, वंगलादेश, भुटान, भारत, माल्दिभ्स, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका मिलेर नोभेम्बर २७, २०१४ मा उर्जा सहयोगका लागि सार्क क्षेत्रीय सहयोग फ्रेमवर्क, सम्झौतामा काठमाडौँमा आठवटै देशका मन्त्रीहरुले हस्ताक्षर गरे । क्षेत्रीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने र विशुद्ध व्यापार अभिवृद्धि गर्ने बुँदाहरु त्यसमा उल्लेख छन् । यस्तै बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (BMSTEC) को १४ विषयगत सहयोगका क्षेत्रहरुमा उर्जा, मत्स्यपालन, कृषि, पर्यावरणजस्ता विषयहरुमा सहयोग गर्ने उल्लेख छ । पहाडी र सामुद्रिक बंगालको खाडी) अर्थतन्त्रलाई गाँसेर हरित अर्थतन्त्र विकास गर्ने २०१८ अक्टोबर १६ मा BRICS-BMSTEC Outreach Summit मा प्रस्ताव गरिएको थियो । बंगलादेशले नेपालको बिजुली किन्ने, जलस्रोत क्षेत्रमा लगानी गर्ने, प्रस्ताव पटकपटक पठाएका छन् । तसर्थ क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय तहमा जलस्रोतको क्षेत्रमा परस्पर सहयोग अभिबृद्धि गर्ने नेपालको प्रष्ट दृष्टि देखिन्छ ।
नेपाल र चीन नदीनाला, पहाड, पर्वत र हिमालले जोडिएका, प्राग–ऐतिहासिक कालदेखि जनस्तरमा सम्बन्ध रहँदै आएका घनिष्ठ मित्र देशहरु हुन् । जलस्रोतको दृष्टिबाट दुबै एउटै जलाधार भएको सहतटीय मुलुकहरु हुन् । चीनको तिब्बत स्वशासित क्षेत्र बीचमा रहेको हिमालय, हिमपात र हिमनदीहरुकाके पार्यवरणसित दुबै देशकाके साझा सरोकार छ । नेपालको जलस्रोतको विकासमा चीनको सरकारी र गैरसरकारी क्षेत्रबाट गहिरो अभिरुची राखेर योगदान गर्दै आइरहेको पाइन्छ । हिमालवारी र पारीको पर्यावरण जोडिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल असर न्यूनीकरण गर्न दुवै देशले साझा प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ । मेकोङ्ग नदीको क्षेत्रीय सहयोगमा चीन र दक्षिण पूर्वी एशियाले साझा प्रयास गरेजस्तै दक्षिण एशियाको जलस्रोत विकास गर्न सहजलाधार क्षेत्रका पार्टनरको रुपमा चीनलाई पनि सहभागी गराउनु पर्छ ।
दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशहरुको समृद्धि यस क्षेत्रका देशहरुको आपसी सहकार्यबाट नै सम्भव छ । यस क्षेत्रमा हुने अन्य देश तथा बाहय हस्तक्षेप हाम्रो सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । प्राकृतिक स्रोत, मानवीय स्रोत, आर्थिक तथा अन्य सबै क्षमताका दृष्टिले यस क्षेत्रका देशहरु सबल छन । तर, बाहय हस्तक्षेपका कारण यहाँ आपसी सहकार्य हुन सकेको छैन । आपसी सहकार्य हुन नदिन र एशियालाई नै पछाडी पारी राख्न अमेरिका लगायतका ठूला देशहरुले बेला बेलामा विभिन्न निहुहरु उठाउने गरेका छन । फुटाउ र राज गर भन्ने नीतिमा उनीहरु कहिले एक देशको अधिकार, त्यो देशका नागरिक अधिकार, मानव अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षाको अधिकार जस्ता अनेक कुरा उठाउने गर्दछन । अन्ततः ती सबै कुराको गुदी कुरा भनेको दक्षिण र पूर्वी एशियाको समृद्धिलाई रोक्नु हो । आपसी सहकार्य रोक्नु हो ।
अमेरिकाले ल्याएको इन्डो प्यासिफिक रणनीति, एमसीसी, तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐन लगायतका कुराहरु सबैभन्दा ठूला चुनौती हुन । तिब्बतलाई घेरा हालेर यस क्षेत्रलाई सधै अस्थिर राख्न अमेरिकासहितका पश्चिमा देशहरु चाहन्छन् । यसलाई हामीले तोडेर बलियो एकता कायम गर्नुपर्छ । यहाँको गरिबी, अशिक्षा र अस्थिरता अर्को चुनौती हो । यी चुनौतीलाई हामी आफै मिलेर समाधान गर्न सक्छौं ।
तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐनको सेक्सन ३४३ मा भनिएको छ कि “चीनले विश्व जनसंख्याको थोरै प्रतिशत ओगट्छ । तर, विश्वको पिउन योग्य पानीको धेरै थोरै प्रतिशत पानी मात्र विश्वले उपयोग गर्न पाएको छ । जबकी दक्षिण पूर्वी एशियाका धेरै देशहरुमा नै पानीको ठूलो अभाव छ ।” यसले प्रष्ट पार्दछ कि तिब्बतमा रहेको पानीको स्रोतमाथि विश्व जनसंख्याका लागि भन्दै अमेरिकाले प्रत्यक्षत दाबी गरेको छ । जबकि दक्षिण र पूर्वी एशियाका अधिकांश ठूला नदीको स्रोत तिब्बतमा छ । कुनै एक देशले अर्को देशको प्राकृतिक स्रोतमाथि यसरी दाबी गर्नु, ऐन बनाउनु र विश्व जनसंख्याको अधिकारका लागि भन्दै अर्को देशको स्रोतमाथि दाबी गर्नु नांगो हस्तक्षेप हो । भोलि अमेरिकाले यसरी नै नेपालका नदीहरुमाथि पनि दाबी गर्छ । अरु देशमाथि नै यसरी नै विस्तारै दावी गर्छ । यो नीति अन्ततः विश्वकै लागि खतरा हो । दक्षिण पूर्वी एशियाको विकास र आपसी सहकार्य हुन नदिन अमेरिका लगायत विस्तारवादी देशका यस्ता नीतिले फुटाउने र राज गर्ने गर्दछन् ।
तिब्बतमा रहेको पानीको स्रोतमाथि मात्र होइन तिब्बत नीति तथा सहयोग ऐनको सेक्सन ३४३ मा दक्षिण पूर्वी एशियाका नदीहरुमाथि नै अमेरिकाले दाबी गरेको छ । ऐनको सेक्सन ३४३ मा तिब्बत पठार भूमीमा स्रोत रहेको मेकङ नदीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । मेकङ नदी चीन, भियतनाम, कम्बोडिया, लाओस र थाइल्याण्ड हुँदै बग्ने नदी हो । यो नदीका सरोकारवाला देशहरुले यस क्षेत्रमा मेकङ नदी क्षेत्र सहकार्य योजना निर्माण गरी निकै प्रभावकारी रुपमा लागि गरेका छन । तर, त्यसबाट आत्तिएर अमेरिकाले यही ऐन मार्फत हस्तक्षेपकारी नीति अघि सारेको छ । यो पनि अर्को देश तथा दक्षिण पूर्वी एशियामाथिको हस्तक्षेप हो । यसले दक्षिण पूर्वी एशियाली देशहरुकाबीच भइरहेको सहकार्यलाई भत्काउने प्रयास हो ।
सिन्धु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय नदीको दर्जा दिनुपर्दछ । यस जलस्रोतलाई सबै सहतटीय मुलुकहरु (चीनसहित) मिलेर वृहत क्षेत्रीय सहयोग (मेकोङ्ग मोडल) तर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । निर्वाध जलमार्ग खुलाउनु पर्छ । विद्युत प्रशारण मार्ग एक अर्कोसित जोड्दै लानुपर्छ । यसरी २१औं शताब्दी एशियाको शताब्दी बनाउन जलस्रोत विकासमा साझा प्रयास जारी राख्नुपर्छ । धन्यवाद !
-बरिष्ठ लेखक तथा रुसका लागि पूर्व नेपाली राजदूत श्रेष्ठले ललितपुरमा आयोजित ‘एशियाको जलश्रोत, क्षेत्रीय सहकार्य र नेपालको दृष्टि’ बिषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र
प्रकाशित मिति: बिहिवार, भदौ २४, २०७८, १०:४८:५०